ိအခ်စ္ေရးရာ Archives - Celegroup
November 24, 2021 Celegroup1975 0
မဖောက်ပြားရုံ မသောက်စားရုံနဲ့ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီ တာဝန်ကျေပြီလို့ ထင်တာလား ။အဲ့ဒါရှိဖို့လိုအပ်သလို အဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲ မလုံလောက်သေးဘူး ။ ယောက်ျားလေးတော်တော်များများ ထင်နေကြတာပါ ငါ ဖောက်ပြန်နေလို့လား သောက်စားနေလို့လားဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း မကြာခဏ ကြားကြားနေရတာတွေလေ မဖောက်ပြားပါဘူး ပြီးတော့ မေသာက္စားပါဘူး ဒါတွေအတွက် တကယ်လဲကျေးဇူတင်မိသလို ပျော်လဲ ပျော်ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒါနဲ့ပဲ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင် ရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်လို့ရပြီလို့ အထင်ရောက် နေတာတော့ မှားတယ် […]
သူနဲ့အိပ်ပြီးလို့ မသန့်တော့ပါဘူး ဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်
November 19, 2021 Celegroup1975 0
သူနဲ႔အိပ္ၿပီးလို႔ မသန္႔ေတာ့ပါဘူး ဆိုၿပီး စိတ္ညစ္ေနတဲ့ မိန္းကေလးမ်ား ဖတ္ရန္..၊ သူနဲ႔အိပ္ၿပီးလို႔ မသန္႔ေတာ့ပါဘူး ဆိုၿပီး စိတ္ညစ္ေနတဲ့ မိန္းကေလးမ်ား ဖတ္ရန္..။ မဆိုင္သူမ်ားမဖတ္ရ ေကာင္းပါၿပီ မေျပာခင္ကြၽန္ေတာ့္ကိုကြၽန္ေတာ္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ..။ တစ္ခါတစ္ခါမွာ ေျပာျပတဲ့လူအေၾကာင္းကိုသိျခင္းဟာ ေျပာမယ့္ စကားကို ပိုၿပီးေလးနက္ေစတယ္ထင္မိလို႔ပါ..။ ကြၽန္ေတာ္ Minctionary ပါ။ ဒီကေလာင္နာမည္နဲ႔အတူ နာမည္ႀကီးခဲ့တာက ပြင့္ေၾကဖတ္ေႂကြဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးေတြပါ..။ မိန္းကေလးေတြဖက္က အလိုမလိုက္ဖို႔ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ္ ျမႇင့္ဖို႔အေၾကာင္း ေယာက်ာၤးယုတ္ေတြအေၾကာင္း အသိေပးခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေလးေတြပါ..။ ေနာက္ပိုင္းမွာ […]
November 16, 2021 Celegroup1975 0
အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုးိသမီး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင် ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ထူးဆန်းနေတာပေ့ါ…. ဒါနဲ့ သတင်းထောက် တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူး တယ်… …. “အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါ ကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲ ဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိပါရစေ” “ဒီလိုပါ… ပထမယူတဲ့ အမျိုးသား က သွေးတိုး ရောဂါရှိတယ်၊ မင်္ဂလာဦၤး ည မှာ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ […]
November 11, 2021 Celegroup1975 0
အိမျထောငျသညျ အဈမကွီးတဈယောကျရဲ့ တောငျးဆိုခကြျအရ တငျလိုကျပါပွီ နောကျအိမျထောငျပွုတဲ့ ဖခငျ ၊မိခငျတိုငျးလိုလို အမြားစု ဘဝဇာတျသိမျး မကောငျးကွပါဘူး …။ ကနြျရဈခဲ့တဲ့ အမေ့ အဖေ့ ကို အသနားပိုပွီး သားသမီး မြားက ပို ခစြျကွတယျ …။ အသိစိတျက အဖေ အမေ ဆိုပမေယ့ျ မသိစိတျကကွညျညိုလို့ မရတဲ့ ဖခငျ၊မိခငျ ဖွဈနတောပါ …။ အသိစိတျက သှေးသား တောျစပျပမေယ့ျ မသိစိတျက သူစိမျးတဈယောကျ […]
ရင့်ကျက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဒီအချက်လေးတွေ သိထားသင့်တယ်
ရင့ျကကြျသူတဈယောကျဖွဈဖို့ ဒီအခကြျလေးတှေ သိထားသငျ့တယျ (၁) မဖွခေငြျတဲ့ မေးခှနျးမြိုး အမေးခံရတဲ့အခါ မေးသူရဲ့မကြျလုံးကို စိုကျကွည့ျပွီး ပွုံးပွပါ။ (၂) လမျးလြှောကျခြိနျ ကိုယျကိုတည့ျတည့ျမတျမတျထားပါ။ စိတျရှုပျခြိနျ လမျးမှာတှေ့တဲ့လူတှကေို နှုတျမဆကျခငြျရငျတောငျ ခေါငျးညိတျပွုံးပွပါ။ (၃) သူငယျခငြျးဆိုတဲ့ သတျမှတျခကြျက သငျအဆငျပွခြေိနျ သူပြောျမယျ။ သငျအဆငျမပွခြေိနျ သငျနဲ့အတူ သူပူပနျမယျ။ ဒါကို သခြောမှတျထားပါ။ (၄) ကိုယ့ျဆုံးဖွတျခကြျ ကိုယျခပြါ။ ဖွဈလာသမြှ ခံယူဖို့ ပွငျဆငျပါ။ စမလုပျခငျ လောကကွီးမှာ […]
ငယ်ချစ်ဦးနဲ့လွဲခဲ့သူများ မဖတ်ရ ကလေးဘဝကိုပြန်လွမ်းမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားတော့ အချစ်ဦးကိုတန်းပြန်သတိရတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဘာကောင်ကြီးတွေမှမဟုတ်ပဲ အချစ်ဦးအတွက်ဆို သူရဲကောင်းကြီးအဖြစ်ရှိချင်ခဲ့ကြတယ်။ ကလေးဘဝကိုပြန်သွားတာနဲ့အချစ်ဦးဆိုတာကလည်း ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ အချစ်ဦးလို့သုံးတာက Crush ဆိုတဲ့စကားကိုကလေးဘဝကမသိခဲ့သေးတာရော Crush တယ်ဆိုတာထက်ပြီးမြတ်နိုးခဲ့မိတာကြာင့်ရောပါ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှစ်သက်ပြီး ပြန်တမ်းတကြတဲ့အဖြူစိမ်းကျောင်းသားဘဝမှာဆို မနက်မိုးလင်းလို့ကျောင်းရောက်တာနဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့လေးနဲ့ကိုယ် ကလေးတို့သဘာဝဆော့မယ် ကစားမယဒီလိုနဲ့အချိန်ကုန်တတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချစ်ဦးဆိုတဲ့ကောင်မလေးက စိန်ပြေးတမ်းကစားနေသလား ကြိုးခုန်နေသလား ဇယ်ခုပ်နေသလားဆိုတာကိုလည်း စိတ်ဝင်တစားလိုက်ကြည့်ခဲ့ကြဖူးမှာပါ။ အခါအခွင့်သင့်တာနဲ့ သူကစားနေတဲ့ ဝိုင်းထဲမှာ ကိုယ်ပါဝင်ခွင့်ရဖို့အသင့်ရှိနေခဲ့ကြဖူးတယ်မလား ကျွန်တော့်အချစ်ဦးဆို သူတအားဆော့တာက အဝတ်ကိုမျက်လုံးမှာစည်းပြီး […]
ချစ်သူက စနေ သားသမီးလေးဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ…..
August 10, 2021 cele group 0
ချစ်သူက စနေ သားသမီးလေးဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ….. စနေသားသမီးတွေကလူ့ဘဝကို စရောက်ပြီဆိုကတည်းကစိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကိုနာကျင်အောင်လုပ်တတ်တယ်။ စနေ သားသမီးကိုချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင်…. စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကိုစရောက်ပြီဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီ ဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။ ပြောချင်တဲ့စကားကိုသွယ်ဝိုက်မပြောတတ်ဘဲ တိုက်ရိုက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တယ်။ အစွဲအလန်းကြီးတယ်။ အမှတ်တရတွေကို သတိရနေတတ်တယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့လူဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့မမေ့တတ်ကြဘူး။ ဒေါသကြီးရင်လည်း သူများနဲ့မတူအောင်ပါပဲ။ စိတ်ကြီးတယ်မဟုတ်မခံတတ်ဘူး။ အချိန် ခဏလေးနဲ့ဒေါသအရမ်း ထွက်တတ်ပေမယ့်ဟုန်းခနဲ […]
ခ်စ္သူ ရည္းစားေတြၾကားမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးေရပန္းစားခဲ့တဲ့ ေမြးေန႔ကိတ္ေလး
August 9, 2021 cele group 0
ချစ်သူ ရည်းစားတွေကြားမှာ တော်တော်လေးရေပန်းစားခဲ့တဲ့ မွေးနေ့ကိတ်လေး လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် မွေးနေ့ဆိုတာဟာ အမှတ်တရတွေ များစွာနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နေ့ထူးရက်မြတ်လေး ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီမွေးနေ့လေးမှာ ချစ်ရခင်ရသူတွေနဲ့ အတူပျော်ကြ အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးကြနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြရပီး အမှတ်တရအနေနဲ့ မွေးနေ့ကိတ်လေးခွဲကြပါတယ်။ မွေးနေ့ကိတ်ကိုတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးစိတ်ကြိုက် ပုံစံအမျိုးမျိူး ပြုလုပ်ပေးတတ်ကြပီး အခုတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်လည်း လူအများကြားမှာ စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်နေတဲ့ မွေးနေ့ကိတ်လေးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီမွေးနေ့ကိတ်လေး ဒီဇိုင်းလေးဟာ လက်ထပ်ပီးသားသူတွေ မကြာခင်လက်ထပ်တော့မယ့်သူတွေအတွက် ဖန်တီးထားတာဆိုပေမယ့် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ […]
ခ်စ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ မင္းရယ္…မုန္းခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရတဲ့ ကိုယ္ရယ္…..အရင္ဘဝက ဆုေတာင္းမွားခဲ့ၾကတယ္တူပါတယ္…..
August 4, 2021 cele group 0
ရေစက်ရှိသလောက်ဆုံဆည်းခွင့်ရပြီးကံပါသလောက်ပဲ ပတ်သက်ခွင့်ရတဲ့ အချိန်လေးမှာ…….. ဘယ်လောက်ပဲမြတ်မြတ်နိုးနိုး နဲ့ ချစ်ခဲ့ချစ်ခဲ့ဘယ်တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေမှာပဲ သစ္စာတွေဆိုဆိုဝေးချိန်တန်ရင် ဝေးရတာပါပဲ…… သူပျော်ရွှင်နေတာကြားတော့လည်းကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရသလိုအရင်လူနဲ့ရယ်ရယ်မောမောဖြစ်နေတာ တွေ့နေရတော့လည်းကိုယ်ကျန်းမာ ချင်ယောင်ဆောင်ရတာပါပဲ…… ဒီလိုပါပဲကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့တချို့လိမ်ညာမှုတွေဟာအဲဒီလိုပဲ အတိတ်က ကာလတစ်ခုမှာသိပ်ကို ယုတ္တိတန်ခဲ့တာမျိုးပါ…. အလွတ်ရထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဦးနှောက်ထဲက ထုတ်ပစ်ဖို့ ခက်ခဲနေတာကလွဲရင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသိဖို့အချိန်တိုင်း သူ့ရဲ့ အကောင့် လေးကိုမယောင်မလည် သတိထားမိနေတာတစ်ခုကလွဲရင်…. တိုက်ဆိုင်တာတွေ့လည်း ကြေကွဲလိုက်မသက်ဆိုင်တာမြင်တော့လည်း ပြိုလဲလိုက်သိပ်တော့ ရင်နာစရာကောင်းတယ်…. မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ရတဲ့ ပတ်သက်ခဲ့မှုတွေရယ်မေ့လိုက်ပြီလို့ လိမ်ညာရတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေရယ်…. ချစ်ချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းရယ်မုန်းချင်ယောင် ဆောင်ရတဲ့ ကိုယ်ရယ်အရင်ဘဝက […]
ခ်စ္ရတဲ့ရက္ေတြကို ေရတြက္ေနတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္ သစၥာေဖာက္ခံခဲ့ရတယ္……..
ချစ်ရတဲ့ရက်တွေကို ရေတွက်နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ် သစ္စာဖောက်ခံခဲ့ရတယ်…….. သစ္စာဖောက်ခံရခြင်း … ချစ်ရတဲ့ရက်တွေကို ရေတွက်နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ် မပြတ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေနောက်ထပ်ရှုပ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု သိရှိလာ ခဲ့ရတယ်,အဲ့ဒီအချိန် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ကျွန်မမှာ ကမ္ဘာပျက်ခဲ့ရတာပါပဲသူဒီလိုတော့ မလုပ်ရက်ပါဘူးလို့ ယုံကြည် နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်,ကျွန်မတို့ချစ်ခဲ့ကြတာနှစ်နှစ် ဒီနှစ်နှစိအတွင်းမှာ ပျော်စေခဲ့တာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ခဲ့သလိုနာကျင်စေခဲ့တာ တွေကိုလဲ ခွင့်လွှတ်ရင်းရှေ့ဆက်ခဲ့ကြတယ်,တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ့်ဘက်ကဆွဲခဲ့မိသလိုတစ်ခါတစ်ရံ သူလျှော့ခဲ့တာတွေလဲရှိတယ် ….? ပျော်ရွှင်စရာလို့ထင်ပြီး ချစ်ခဲ့တဲ့ရက်လေးတွေကို ရေတွက်နေတုန်းရှိနေသေးတယ်,နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ထက် ပိုချစ်ပြနေတဲ့ သစ္စာမဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ […]
ရည္းစားအမ်ားႀကီး ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာနိုင္တဲ့ ဘဝသင္ခန္းစာမ်ား…
August 3, 2021 cele group 0
ရည္းစားအမ်ားႀကီး ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာနိုင္တဲ့ ဘဝသင္ခန္းစာမ်ား… အခုလိုေခတ္ႀကီးထဲမွာ ရည္းစားဆိုတာ တစ္ေယာက္မကထားဖူးခဲ့ၾကမွာပါ။ တစ္ခါတစ္ေလ အခ်စ္ေရးကံမေကာင္းလို႔ ရည္းစားေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိၾကမွာေပါ့။ ပတ္ဝန္းက်င္ကေတာ့ ဒီေကာင္မေလး ရည္းစားမ်ားတယ္ဆိုၿပီး သြားပုတ္ေလလြင့္ ကဲ့ရဲ့နိုင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း ရည္းစားမ်ားျခင္းဟာ ေရွ႕ဆက္ေလၽွာက္မယ့္ ကိုယ့္ဘဝခရီးလမ္းအတြက္ အက်ိဳးရွိေစနိုင္ပါတယ္။ ဘာေတြမ်ားျဖစ္မလဲ တစ္ခ်က္ေလာက္ ဆက္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္ …။ (၁) အမ်ိဳးသားေတြအေၾကာင္း ပိုသိလာတယ္” ရည္းစားမ်ားၿပီဆိုမွေတာ့ ပတ္သက္ခဲ့ရတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြလည္းဘမွာအမ်ားႀကီး ရွိခဲ့မွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဴးသားတို႔ကို […]